Ogaden News Agency (ONA) – Aqalka Sanetka Maraykanka oo Diiday Inay Obamacare Laalaan.
Aqalka Sanetka Maraykanka oo Diiday Inay Obamacare Laalaan.
Xisbi Jamhuuriga ee Maraykanka ayaa markale waji gabax kala kulmay codkii loo qaaday in la burburiyo Sharcigii Caymiska dalkaasi ee loo yaqaan Obamacare.
Sharciga Caymiska caafimaadka ee uu hirgeliyey Obama ayaa kamid ahayd qodobada ugu muhiimsan ee Trump uu sheegay inuu burburin doono, sidoo kale xisbiga Jamhuuriga ayaa muddo dheer ku goodinayey inay sharcigaasi tirtiri doonaan. Aqalka Hoose ayaa bishii hore ansixiyey qorshe cusub oo lagu bedalayo Obamacare, walow qorshahaasi lagu sheegay mid kaliya loogu daneeyey Tujaarta dalkaasi oo hoos loogu dhigay canshuurtii laga qaadi jiray iyadoo dadka saboolka ah culeys weyn dusha laga saaray.
Sharcigan todobaadyadii lasoo dhaafay horyaalay Aqalka Sare ee Senate-ka ayaa heli waayey taageero ku filan kadib markii 7 kamid ah Xildhibaana Xisbiga Jamhuuriga ay ku biireen kuwa mucaaridka ah ee xisbiga Dimuquraadiga iyagoo diiday inay codkooda siiyaan qorshaha ay soo diyaariyeen xildhibaano kamid ah Xisbigooda. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku weeraray qaar kamid ah Xildhibaanada haweenka ah ee xisbigiisa Jamhuuriga oo iyagu diiday inay taageeraan laalida Obamacare.
Qorshaha ay doonayeen inay ansixiyaan Jamhuuriga ayaa ah mid si weyn hoos loogu dhigay miisaaniyada lacagta ay dowlada ku kabto Caymiska caafimaadka ah ee dadka Saboolka iyo curyaamiinta ah ee loo yaqaan (Medicaid), waxayna canshuur dhaaf xaddhaaf ah u qorsheeyeen Maalqabeenada iyo shirkadaha waaweyn ee dalkaasi.
Xafiiska loo yaqaan Congressional Budget Office ee isagu dhex dhexaadka ah eegana miisaaniyada ayaa sheegay in sharcigan hadii la hirgeliyo ay caymiskooda caafimaadka waayi doonaan dad gaaraya 32 milyan oo qof.
Xildhibaanada Jamhuuriga ayaa kadib markii ay waayeen taageerada ay ku meel marinayaan sharcigooda cusub isku dayey inay cod ku lalaan sharuucdii horey u jirtay ee Obamacare iyagoo aan heyn waxa ay ku bedalaan, taasi oo keentay in markii 2aad uu mooshinkan dhaafi waayo Aqalka Sare, arrintan oo waji gabax ku ah Madaxweyne Trump iyo xisbigiisa Jamhuuriga ee heysta aqlabiyada labada Aqal ee Baarlamaanka.